कफी खेतीमा युवा पुस्ताको आकर्षण - Sankalpa Khabar
5. मन्त्री टुंगो लगाउन माओवादी स्थायी कमिटी बैठक बस्दै
6. आवास, गाडी र तलबभत्ता नलिने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठको घोषणा
७ असार १०:४१
फुङ्लिङ । ताप्लेजुङ जिल्लामा पछिल्लो समयमा युवापुस्ताको व्यावसायिक कफी खेतीतिर आकर्षण बढ्दै गएको छ । कफी खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएकाले बिस्तारै यसको खेतीतिर आकर्षण बढ्दै गएको हो । पछिल्लो समय कफीको बजार माग बढ्दै गएसँगै यसबाट राम्रो आम्दानीको सम्भावना देखेपछि किसानले व्यावसायिकरूपमै खेती सुरु गरेका हुन् ।
हाल आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका–३ हाङ्पाङ र वडा नम्ब। ५ चाँगे तथा मैवाखोला गाउँपालिका–१ ढुङ्गेसाँघुका किसानले व्यावसायिकरूपमा कफी खेती सुरु गरेका छन् । सुरुमा परीक्षण गर्दा नै कफी राम्ररी फस्टाएको र कफीका लागि उपयुक्त हावापानी र जमिन रहेको पाइएपछि स्थानीय किसानले व्यावसायिक खेती सुरु गरेको बताइएको छ । किसानका अनुसार अहिले धमाधम कफी खेती विस्तार हुन थालेको छ ।
ढुङ्गेसाँघुका किसान चन्द्र तामाङले हाल व्यावसायिक कफी खेती सुरु गरेका छन् । चार वर्ष अघिदेखि कफीको बिरुवा रोप्न शुरु गरेर अहिलेसम्म करिब ४० रोपनी क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गरेको तामाङले बताए । उक्त क्षेत्रफलमा एकहजार ५ सय बिरुवा रोपेको र सुरुसुरुमा रोपेको बोटमा फल लाग्न थालेको उनले बताए । उनले यसवर्ष चारहजार किलोग्रामसम्म कफी उत्पादन हुने बताए ।
ढुङ्गेसाँघुकै अर्का किसान ध्रुव वनेमले कफीको व्यावसायिक खेती सुरु गरेका छन् । वनेमले १५० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा करिब दुई हजार ५ सय बिरुवा लगाएका छन् । उनको खेतीबाट पनि उत्पादन हुन थालेको र दुई हजार ५ सय किलोग्रामसम्म उत्पादन हुने अनुमान लगाएको उनको भनाइ छ । तामाङ र वनेमसहित ढुङ्गेसाँघुका छ जना किसानले व्यावसायिक कफी खेती सुरु गरेका छन् ।
यस्तै आठराई त्रिवेणी–३ हाङ्पाङका किसान लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले पनि आफूले लगाएको कफी खेतीबाट उत्पादन हुन थालेको जानकारी दिए । सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ चाँगेका स्थानीय किसान घनु गौतमले पनि व्यावसायिक कफी खेती लगाएका छन् । यसरी हाङ्पाङ र चाँगेमा दर्जनौँ किसानले व्यावसायिकरूपमा कफी खेती सुरु गरेको बताइएको छ ।
यता कफी खेतीबाट आम्दानी पनि हुन थालेको किसानले बताएका छन् । उत्पादित कफी अहिले प्रतिकिलोग्राम रु ८० ले बिक्री गर्दै आएको किसानको भनाइ छ । प्रशोधन गरेको कफी भने प्रतिकिलो रु ७ सयका दरले बिक्री हुने हुँदा किसान आफैँले गाउँमै कफी प्रशोधन गर्ने व्यवस्थाका लागि जुट्दै आएको पनि बताएका छन् । हाल व्यावसायिक खेती सुरु भएको क्षेत्र ढुङ्गेसाँघु, चाँगे र हाङ्पाङबाट करिब १० हजार किलोग्रामसम्म कफी उत्पादन हुन थालेको ढुङ्गेसाँघुका किसान तामाङले जानकारी दिए ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्यो
१३ श्रावण १०:४६
तीन दिनभित्र कर तिर्न महानगरपालिकाको ताकेता, नतिरे जरिवाना
१३ श्रावण १५:१९
१२ श्रावण १५:०८
सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको आइपिओ साउन २० गतेदेखि
१२ श्रावण १२:४२
१३ श्रावण १२:४९
बढ्यो श्रमिकको ज्याला, कसले कति पाउँछन् ? (विवरणसहित)
१२ श्रावण १४:२०
१२ श्रावण १४:०९
खैरहनी नगरपालिकामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन
१८ श्रावण १५:१३
कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले सांसद पदमुक्त हुँदा मुख्यमन्त्री शाही गदगद्
१८ श्रावण १९:०३
चार पूर्वमाओवादी नेतालाई सांसद पदमा पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चले दिएन…
१८ श्रावण १८:४५
एमालेले गठन गर्‍यो ९ विभाग, माधव समूहले के गर्ला…
१८ श्रावण १८:४०
कर्णालीका ४ सांसदमाथि एमालेको कारवाही सदर
१८ श्रावण १८:२७